कमला ह्यारिस सान फ्रान्सिस्कोमा माउन्ट बेच्छ; कन्डो DC को लागि खरीददार खोज्दै - व्यक्ति - TELES RELAY
कमला ह्यारिस सान फ्रान्सिस्कोमा माउन्ट बेच्छ; कन्डो डीसी - व्यक्तिको लागि खरीददार खोज्दै
By TELES RELAY	 On मई 3, 2021
एक सम्पत्ति तल, एक उपाध्यक्ष कमला ह्यारिसको लागि। ह्यारिसले स्यान फ्रान्सिस्कोमा आफ्नो सोमा लफ्ट $ 860०,००० मा बेचे र अहिले उनी वाशिंगटन, डीसीमा कन्डोको लागि खरीददार खोजिरहेका छन्। गत महिना, हैरिस वाशिंगटनमा युएस नेभल वेधशालाको आधारमा उपराष्ट्रपतिको सामान्य निवासमा सरेका थिए।
भवनको माथिल्लो फ्लोरमा अवस्थित, १,०1 square वर्ग फुट एसएफ सम्पत्तिमा एक शयनकक्ष र डेढ बाथरूम समावेश छन्। यसमा अन्य सुविधाहरू मध्ये एउटा आँगन, फायरप्लेस र एल्कोभ डेस्क पनि समावेश छ।
उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले उनको फ्रान्सिस्कोमा सोमा लुफ्ट बेचेकी छिन। (Redfin)
ह्यारिसले २०० 489 मा सम्पत्ति। 000 ,2004, ००० मा किनेकी थिइन। उही वर्ष उनी सान फ्रान्सिस्को जिल्ला वकील चुनिएकी र color्गमा पहिलो व्यक्तित्व भइन्।
ह्यारिस वाशिंगटनमा रहेको आफ्नो पुरानो घरको लागि १.1,995 मिलियन डलरको पनि खोजी गर्दैछ, Realtor.com रिपोर्ट गर्दछ।
कमला ह्यारिस आफ्नो डीसी कन्डोको लागि खरीददार खोज्दैछिन्। (Redfin)
१,1१ वर्ग फिट डीसी कन्डोमा दुई शयनकक्ष र दुई स्नानगृहहरू छन्। यसमा अनुकूलन क्याबिनेटरी, प्राकृतिक ओक हार्डवुड फ्लोर र वाक वाक इन पन्ट्री पनि पर्छ। विकासले २//731 दरबन्दी सेवा, कुकुर धुने स्टेशन र छानाको स्विमिंग पूल प्रदान गर्दछ।
ह्यारिससँग अझै चार शयनकक्ष, पाँच बाथरूम घर उनका पति डग एम्हफसँग लस एन्जलसको ब्रेन्टवुड नजिकै छ। यो सम्पत्ती बजारबाट टाढा रहन्छ।
यो लेख पहिलो (अंग्रेजीमा) https://www.mercurynews.com/2021/05/03/photos-kamala-harris-sells-san-francisco-loft-seeks-buyer-for-dc-condo / मा प्रकाशित भयो
नासाले क्रू ड्र्यागन चालक दललाई घर जान दिन सक्दैन - BGR
फुट PSG - PSG: Mbappé प्याकेज? पेरिस मा ठूलो चिन्ता! - FOOT 01